Madaxweyne Xasan ?Guri kasta waa in laga qiimeeyaa maalinta calanka, waalidku ha bareen caruurta? – Radio Daljir
Oktoobar 12, 2013 3:53 b 0
Adis Ababa, October 12, 2013 – Madaxweynaha Soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa hanbalayada maalinta calanka Soomaaliyeed u diray shacabka, xili uu booqasho ku joogay magaalada Adis Ababa ee xaruunta dalka Itoobiya, halkaas oo uu kaga qayb gelayo shirka madaxda Afrika.
?Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu hanbalyeynayaa maalinta qiimaha badan 59 sano kadib markii ciida Soomaaliya laga taagay istaanta midaynta calanka Soomaaliyeed.? Ayuu yiri madaxweyne Xasan sheikh.
Madaxweynaha Soomaaliya xasan sheikh maxamuud waxaa uu sheegay in bulsho kasta oo caalamka joogta ay leeyihiin maalmo qiimo gaar ah u leh bulshadooda, waxaa uu xusay in ay tahay maalin aan la ilaawi karin 12 October 1954.
?Guri kasta waa in laga xusaa, waxaan ugu baaqayaa waalidiinta Soomaalida in ay caruurtooda uga sheekayaan qiimaha maanta ay leedahay iyo xataa maalmaha kale.? Ayuu yiri madaxweyne Xasan
Soomaaliya ayaa calan ay leedahay la taagay 12 October 1954-kii, xiligaas oo Soomaaliya ay joogeen guumaystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska in kastoo haddana madaxa lala galay iftiin xorinimo, waxaa calanka sameeyey Maxamed Cawaale liibaan.